Ny kitapo fanovana lasantsy ONYX dia mamela hampihena ny vidiny, ny etona
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Ny kitapo fanovana lasantsy ONYX dia mamela hampihena ny vidiny, ny etona
ONYX Systems, ONYX Systems, mpamorona ny teknolojian'ny angovo madio, dia nanambara ny fisian'ny kitapo fiovam-po propane eo ho eo ho an'ny fiara fitateram-bahoaka John Deere Gator, izay manome tombony ho an'ny mpandraharaha amin'ny vidin'ny solika ambany kokoa, ny entona faran'izay ambany ary ny fitomboan'ny vokatra.
Ny kitapo voamarina EPA & CARB dia mifanaraka amin'ny TX sy HPX John Deere Gators novokarina taorian'ny 2015 ary azo apetraka amin'ny mpivarotra John Deere mandray anjara.
"Ny kitapo fiovam-po amin'ny propane ONYX sy ny rafitry ny motera propane dia nanome vahaolana azo itokisana sy madio ho an'ny mpamboly, kolejy, zaridaina ary kaominina an-jatony ho an'ny mpamboly ara-barotra izay mampihena ny vidin'ny fandidiana manodidina ny $ 1.00 isaky ny ora fiasana isaky ny milina," hoy i Jeremy Hahne, VP of Sales. ao amin'ny ONYX.
"Ireo sampan-draharaha ireo ihany izao dia afaka mamadika ny fiaramanidin'i Gator ho lasa solika mahavelona ny tontolo iainana, mora kokoa ary azo antoka kokoa."
Ny kitapo dia azo apetraka amin'ny alàlan'ny mpivarotra mandray anjara.